Gbasara Anyị | Ahịa Kylin
Kemgbe 1995, dịka onye ikikere, onye ọrụ aka na ọkachamara na China, Kylin Manufactory aghọwo otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị na ụlọ ọrụ ahụ. OEM / ODM emeputa na ekspootu ọkachamara na-amị egwuregwu egwuregwu, kaadị egwuregwu, egwu kaadị, game components, velvet art akwụkwọ mmado, nkwakọ igbe na ngwa. Anyị na-agba ọsọ mmepụta ihe anọ gụnyere; ebi akwụkwọ, osisi, mkpụrụ ego & rọba.
Anyị na-akwado ihe karịrị 10 egwuregwu akụkụ ọkachamara ụlọ mmepụta ihe na-Nlụpụta na mbupụ gburugburu 1 nde iberibe nke egwuregwu na ngwaahịa kwa afọ. Anyị enwetawo mkpara, ụwa klas akụrụngwa na ahaziri ọrụ iji nyere ndị ahịa anyị aka inweta a zuru ọrụ nke n'ichepụta osisi na kaadị egwuregwu n'etiti ọtụtụ others.All anyị akụrụngwa bụ n'etiti ndị kasị mma n'ụwa iji obi ike n'elu àgwà ngwaahịa. A na-emelite kọmpụta anyị ọgbara ọhụrụ, akụrụngwa pre-press na ebe obibi akwụkwọ oge niile iji soro usoro teknụzụ kachasị ọhụrụ na ụlọ ọrụ nbipụta na nkwakọ ngwaahịa ka anyị wee nwee ike ijide n'aka na anyị na-arụ ọrụ kachasị mma.
Anyị Filming Department na-onwem na akpaka efere processor, ikpughe etiti, film kọntaktị na ngwa nbipute, film ntụmadị, na PS efere ntụmadị. Anyị niile post-pịa akụrụngwa dị ka akwụkwọ ịpị igwe, kaadị mbadamba laminator, creasing na ọnwụ igwe, akpaka anwụ ọnwụ igwe, gluing igwe, ike nkuku ọnwụ igwe, eyi Laminator, UV mmanụ na-agafe polishing sọrọ igwe, varnishing igwe, wdg .Our plastic ụlọ ọrụ nwere 10 injection igwe na ọtụtụ dị iche iche akọ. Anyị nwere ngalaba OEM nwere ọkachamara maka ndị ọkachamara maka mmepe ngwaahịa yana ụlọ ọrụ nsị na spraying anyị.
Ọrụ ndị ọzọ metụtara anyị anyị nwere ike ịnye gụnyere ịmepụta mock, ịbịaru teknụzụ, faịlụ 3D na ịkpụzi ọgwụ. E nwere ihe karịrị ebu ogwu ogbugba 500 dị na ogbako anyị iji mepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị egwuregwu ọ bụla metụtara ụlọ ọrụ egwuregwu. Anyị nwere ọkachamara n'ichepụta backgammon, roulette na ngwa ha. Omenala plastik, osisi na ngwaahịa ngwaahịa dị n'ihi nnukwu ahụmịhe anyị na ụlọ ọrụ nke ntanye plastik na-akpụ, nkedo anwụ, ịkpụ akpụ, ịkpụzi slush, oghere agụụ, imepụta acrylic, ikpo ọkụ na-ebugharị, silkscreen, mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, ọkụ ọkụ , ihe mgbochi agụụ na ndị ọzọ.
Anyị kwenyere na nkwurịta okwu na-aga nke ọma n'etiti ndị nrụpụta na ndị ahịa dabere na ntụkwasị obi na ịkwụwa aka ọtọ. Gbasochi ụkpụrụ a na-enye anyị ohere ịbịakarị ma gafere atụmanya ndị ahịa anyị. Ọ na - emekwa ka ndị ahịa anyị laghachitere ọzọ.
Anyị pụrụ iche uru bụ n'ezie na kpọmkwem Chinese ịnye ọnụahịa, ezi na mma ngwaahịa, ahaziri nkwukọrịta na nnukwu ibu ọrụ na na oge nnyefe.
Kylin Manufactory jiri obi ụtọ nabata ndị ahịa ọhụụ na ndị ochie, ndị ahịa ime na mpụga ileta na ilekọta ụlọ ọrụ anyị.
Guidkpụrụ nduzi anyị na-enye ntụkwasị obi, ịkwụwa aka ọtọ, imekọ ihe ọnụ na ịgwọ ọrịa maka ndị ahịa niile site na ịbụ ezigbo ụlọ ọrụ na ngalaba nrụpụta ọrụ anyị. Anyị na-arara onwe anyị nye na-aga n'ihu na-aga n'ihu na anyị Filiks, ngwaahịa na ọrụ.